यस्तो पो क्षमता « News of Nepal
राजधानीमा अहिले बिहान कालो कपडा लगाएर हिंडेको मान्छे बेलुका सेतो कपडा लगाएको अवस्थामा हुने र सेतोे लगाएर हिंडेको रातिसम्म खैरो वा कालो हुने गरेको धरहराको दूरबिनबाट देखिएको छ।
हरेक घरघरमा अहिले यो समस्या छ। वृद्धवृद्धा र बालबालिका त झन् यसबाट बिरामी नै पर्न थालेको समेत पाइएको छ। साँझ परेपछि घाँटीमा क्याप्प धुलोले समाउने गरेको उनीहरु गुनासो गरिरहेको सुनिन्छ। धरहरा वरपर आएरसमेत केही मानिसले यस्तै कुरा गर्दै थिए।
सर्वोच्च अदालतले पनि धूलो हटाउन आदेश दिएको सुनिएको थियो। तर, पालना गर्ने कसले ? जनताको आवाज सुनिदिने कसले ? बरु मान्छे बिरामी भए भने त्यसैको नाममा औषधि उपचार गर्न दाताहरुसँग सहयोग माग्ने र पर्यो भने भ्रष्टाचार गर्ने नियतमा हाम्रा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रका ठूलाबडाहरु मुख मिठ्याएर बस्ने गरेको समेत देखिने गरेको छ।
त्यसैले क्षणक्षणमा मान्छेको ज्यान लिइरहेको यो धूलो र प्रदूषणका बारेमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन।
मान्छे दीर्घरोगी नै भए पनि यहाँ कसलाई के मतलब ? यस्तै पो देखिन थाल्यो त। हुनत यहाँ बिहानबाहिर निस्केको जनतालाई रातिसम्ममा सेतो भए कालो र कालो भए सेतो बनाउने क्षमता भएको हाम्रो सरकार र सरकारी निकाय कति क्षमतावान भनेर प्रशंसा गर्ने पो हो कि ? अरू देशमा कहाँ यसरी रङ नै फेर्न सक्ने सरकार होलान् र ? कुरा नबुझेर यो धरहरा हैरान भएको छ है पाठकबृन्द।